Mudane Erdoğan Mahadsanid W/Q Bashiir M. Xersi | Laashin iyo Hal-abuur
Mudane Erdoğan Mahadsanid W/Q Bashiir M. Xersi
Mudane Erdoğan Mahadsanid
Murti baa leh: “Abaal raag rag baa leh” mid kalana waxay leedahay: “Ruuxii abaalgala waa loo gudaa” mid ka agdhaw ayaa tiraa: “Abaal qof galaa badan, qof gudaase yar” mid kale ayaa dhahda: “Abaal laawe waa Eebbe laawe!” Mid kalana waxay leedahay: “Abaal ha tirsan, haddaan laguu tirin”.
1- SUNTA GALBEEDKA: Kooxdani, waa koox cabsan afkaarta reer Galbeedka, oo aragtida ay ku dhaliilsan yihiin mudane Erdoğan iyo imaatinkiisa Soomaaliya sabab uga dhigaya, waxyaabo ka dhacaya meelo ka baxan Soomaaliya. Xoogga dooddoodu waa; mudane Erdoğan wuxuu faraha kula jiraa colaadda iyo dagaallada ka holcaya BARIGA DHEXE, oo waliba ku eedeynaya, in mudane Erdoğan si toos ah u taageero qolylaha qoorgoynta iyo qalalaasaha ee DAACISH (ISIS) haddaba, kuwan waxaan weydiin lahaa: idinka maxaa idin ka galay waxa ka dhacaya BARIGA DHEXE, oo aadnaan uga hadlayn waxa ka dhacaya BARIGA AFRIKA? Ta kale, ka warrama haddii la idin yiraa: qolylaha iyo qalalaasaha qoorgoynta ee DAACISH (ISIS) waxaaba loo abuuray sidii loogu burburin lahaa xoogga soo ifbaxaya ee Turkiga? Saw ma ogid haddii aad dhanka shishe xaajada ka joogsato, in dhan ka sii fog laga joogsan karo? Ta kale, anaga (Soomaali ahaan) maxaa naga galay ama nooga xiran waxa ka dhacaya BARIGA DHEXE iyo belaayadiisa? Wixii isku raacdaysanaya anagoo ka xun dhibka soo gaaraya marrasta iyo danyarta, haddana, waa: “Laba QAAWAN isma qaaddo” ee saw ma habboona in BARIGEENNA aan ku ekaanno, oo aad nooga sheekaysaan?.
2- SUNTA QABIILKA: Qoladan waa kuwa qabiilku dullaystay, oo ADDOOMMO iyo u ah la haystaal, qabbir iyo ku guujiyey dabar, ayna adag tahay in laga furfuro. Qoladan dooddoodu waa; dhaqaalihii, mashaariicdii, bilcintii iyo wax walba oo hormar keeni kara, waxaa lagu koobay Muqdisho kaliya, oo gobollada iyo magaalooyinka kale waxba lagama siin, waliba hal qabiil oo kaliya ayaa ka faa’iidaysto ama looga faa’iideeyaa!
Ka kaalay taa. Inta aan Turkidu ka furin Ibitaallada Xamar, saw hore ugama furnayn bukaan socod eegtooyin, maxaa laga faa’iidi jiray? Baaritaan walba oo aad samayso, waxay jawaabtu noqonaysaa: waxaa ku haya; Tiifoow, Cagaarshaw, Duumo (Mallaariya), Isfiilito, Gooryaan (Jaarda Laambi), Hargab iwm! Ogsoonow, baaritaannada waxaa ku baxda lacag u dhiganta SHAN BOQOL DOLLAR, intaa waxaa dheer, in laguu qorayo dawo dhacday, kaniini suulkaaga ka weyn iyo sun cad!
Sidoo kale, waxaa jira, dad ku dooda, muxuu Turkigu hadda noogu soo gurmanayaa, oo uusan mar hore noogu soo gudbin saacidaadda, uu hadda na siinaa? Micnaha waa la soo daaheen camal. Oo kaalay, adigu maxaad u dhiibatay oo ay kaala soo daaheen? Soomaalida ayaa tiraa: “Jinni looma labeensho!” tani waxay i soo xasuusiday Maxamuud Axmad Nuur “Tarzan”, oo Dawladda Masar ku dhaliilay in Xasan Sheeq oo booqasho ku tagay ay deeq ahaan u siiyeen HAL MILYAN, oo yiri wax u dhigma; “In laga qaato ma ahayn!”.